China Dental Floss ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Longyan
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > သွားဘက်ဆိုင်ရာသွားပွတ်ကြိုး
သွားတိုက်ကြိုး is to use nylon, silk or polyester floss to clean the dental plaque on the adjacent surface of teeth, which is very effective, especially for flat or convex surfaces. Pull downapiece of dental floss about 25cm, makeacoil on both ends of the floss, or takeapiece of dental floss about 33cm, wind the two ends of the floss around the two middle fingers, and pass the floss through the contact point with the right and left fingers.
လက်နှစ်ချောင်းကြားအကွာအဝေးသည် ၁-၁.၅ စင်တီမီတာခန့်ရှိသည်။ တင်းကျပ်သော်လည်းခံစားနိုင်သောခံစားမှုရှိလျှင်အဆက်အသွယ် ဖြတ်၍ သွားမျက်နှာပြင်ကိုညင်ညင်သာသာထိတွေ့ပါ။ gingival sulcus ဧရိယာကိုသန့်ရှင်းပါ၊ gingival sulcus အောက်ရှိတစ်သျှူးများထဲသို့မဖိမိစေရန်သတိပြုပါ။
Professional China သွားဘက်ဆိုင်ရာသွားပွတ်ကြိုး ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုတရုတ်တွင်ပြုလုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှစိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များကိုလက်ကားရောင်းချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားစျေးနှုန်းသက်သာသောထုတ်ကုန်များပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအမြောက်အများထုတ်ကုန်များပေးနိုင်ပြီးအခမဲ့နမူနာများလည်းပြင်ဆင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ သွားဘက်ဆိုင်ရာသွားပွတ်ကြိုး ကို ၀ ယ်ယူရန်ကြိုဆိုပါသည်။